July Dream: Thailand Visa
ဒါနဲ့ မောင်လေး ရ
အာဆီနိုင်ငံ တွေ အချင်းချင်းဆို ၃ ပတ်အတွက် ဗီဇာ တင်စရာ မလိုဘူး ဆို
(((( ကတောက် )))) သိကြသေးတာပေါ့ကွာ။ မြန်မာပြည်ကောင်းစားမှ ထိုင်းနိုင်ငံသားဆို ဘယ်ဂလောင်မှ ပေးမ၀င်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်... ဟွန်း....(အဘ တသက်တော့မှီတော့မယ်မထင်ပါဘူး။ နောင်လာနောက်သားတွေကိုသာ စကားလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါကွာ)
အလုပ်ရှုပ်ခံလိုက်တာ ဆရာဂျူလိုင် ရယ်။ ပင်နင်ဆူလာမှာ ၁၀ ဒေါ်လာ (တစ်ချို့ဆိုင်က ၂၅ ဒေါ်လာ) ပေးပြီး လျှောက်ခိုင်းလိုက်။ ကတ်ဒ်ပြား ကော်ပီနဲ့ ဓာတ်ပုံပဲ ပေးစရာလိုတယ်။ ဘာစာရွက်စာတမ်းမှ မလိုဘူး။ အမှန်အကန် ပြောတာ။ ကျွန်တော် သွားလျှောက်တာ ၃ ခါ ရှိပြီ။ ဒီနေ့ညနေ ပေးရင် တစ်ရက်ခြား ညနေ သွားယူလို့ရတယ်။
Just want to share my experice last week.
Yes, You are rigth ZT.
I went to Thai embassy and apply visa myself. it is very easy and fast. No need bank account or/show money/SG PR card copies. as mention in the post.
1 copie of my passport
1 copie of Air ticket
ပီအာ အနေနဲ့တော့ မပြောတတ်ဘူး ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်က ပီအာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကောင်တာက ဘဏ်ငွေစုစာအုပ် ပြခိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ္တူကူးပေးစရာတော့ မလိုပါဘူး။ ငွေစုစာအုပ်ကို ကြည့်ရုံလေး ကြည့်ပြီး ပြန်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ပတ်စ်ပို့ မိတ္တူ မတောင်းပါဘူး။
အလည်တစ်ခေါက် လာရောက်ဖတ်ရှု့သွားပါတယ် ။
ထပ်သွားရမယ်ဆိုရင် ယိုးဒယား Immigration မှာ လေယာဉ်ပျံကွင်းက အထွက်မှာ တခါတည်း တိုးလာခဲ့လိုက်တာ ကောင်းမယ်
တို့တုန်းက business visa က ရှုပ်လို့ tourist visa ခဏခဏ လျှောက်တာ reject ထိတယ်၊ တိုးလို့ရမှန်း မသိဘူး၊ ခဏခဏ လာတော့ သူတို့က မသင်္ကာတော့ဘူး .. အဟတ်
တကယ်က (ဟိုး)အရင်က ယိုးဒယားကို visa မလိုဘူး.. မြန်မာနိုင်ငံက ယိုးဒယားကလူတွေကို visa လျှောက်ခိုင်းလို့ .. ယိုးဒယားက ပြန်ပညာပြတာပါ